अाफै सिमाकाे बार भात्काएर लाने तर भारतीय मेडियामा यस्तो उल्टो छाप्ने? – PathivaraOnline
Home > समाचार > अाफै सिमाकाे बार भात्काएर लाने तर भारतीय मेडियामा यस्तो उल्टो छाप्ने?
admin April 30, 2018 April 30, 2018 समाचार, समाज 0
काठमाडाैँ । भारतले नेपालको सिमा बारम्बार मिच्दै आएको छ । अहिले पनि भारतको हस्तक्षेप जारी नै छ । यही क्रममा कञ्चनपुरको पुनर्वासमा फेरि भारतीय सुरक्षाकर्मीले ज्यादती गरेको छ । पुनर्वास नगरपालिका–९ मा नेपाली पक्षले भारतको दुधुवा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट आउने जंगली जनावर नियन्त्रण गर्न विद्युतीय तरबार नेपालले लगाउन खोजेका थिए । नेपाल–भारत सीमा पिल्लर १९१ देखि १९४ सम्म नेपाली पक्षले आफ्नै
भू–भागमा लगाउन खोजेको तरबार भारतीय पक्षले निकालेर फालिदिएको छ । यसरी नेपाललाई भारतले ज्यदती गरिहेको छ । तर भारतीय मिडियाहरूले भारतको भूमि नेपाले मिच्यो भनेर समाचार लेखेको छ ।
अर्को भारतीय मिडिया ‘प्रभात खबर‘ले ‘पालियों ने की भारतीय जमिन पर कब्जे की कोसिस, हुई झड़प’ (नेपालले भारतीय भूमि कब्जा गर्न खोज्दा झडप) भनेर समाचार लेखेको छ ।
नविन रार्इ / न्यूज२४ बाट ।